मलेसिया रोजगार बन्द हुँदा नेपालीको लागी पहिलो रोजगार गन्तब्य बन्यो कतार ! - jagritikhabar.com
मलेसिया रोजगार बन्द हुँदा नेपालीको लागी पहिलो रोजगार गन्तब्य बन्यो कतार !
कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पारेको भन्दै रोजगारीका लागि मलेसिया जान श्रम स्वीकृतिमा सरकारले रोक लगाएसँग नेपाली कामदारका लागि कतार आकर्षक देश बनेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कतार जाने कामदारको संख्या १ लाख ६१ हजार २ सय १५ पुगेको छ। कतारपछि युएईमा १ लाख १९ हजार ८ सय ५५ जना युवा कामका लागि पुगेका छन्। यो संख्या नयाँ श्रम स्विकृति, पुनः श्रम स्विकृति, तथा वैधानिकर णमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हो।
कतार र युएईपछि साउदीमा १ लाख १७ हजार ९ सय ४ जना युवाहरु रोजगारीका लागि पुगेका छन्। हाल कलिङ भि’सा लागेका र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै कामदार मलेसिया गइरहेका छन्। २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्म कलिङ भिसा लागेका र पुनः श्रम स्विकृतिबाट ४२
हजार १ सय ४६ कामदार मलेसिया पुगेका छन्। अघिल्लो वर्ष नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति वैधा’निक च्यानलबाट मलेसिया जाने कामदारको संख्या १ लाख ४ हजार रहेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा अदक्ष नेपाली कामदारहरु विदेशिने गरेका छन्। यस वर्ष पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदार विदेशिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
५ लाख कामदार विदेशिएका मध्ये २ लाख ८५ हजार कामदार अदक्ष छन्। १ लाख ७९ हजार, ६ सय १ जना कामदारमात्रै दक्ष छन्। ४२ हजारबढी अर्धदक्ष कामदार विदेशिएका छन्।
केही विकसित मुलुकमा मात्रै रोजगारीका लागि दक्ष तथा व्यवसायिक कामदार विदेशिने गरेका छन्।
यस वर्ष व्यवसायी कामका लागि ७ सय कामदार बाहिरिएका छन्।.उच्च दक्षता भएका २ सय कामदार विदेशिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रोजगारीको खोजीमा विश्वका १ सय ३६ मुलुकमा ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ जना युवाहरु पुगेका थिए।